Nhau - Makomborero uye Zvimiro zvepepa enthalpy kupisa chinja kubva kuXiamen AIR-E
1). Yakagadzirwa yakakosha fibrous pepa ine yakakwira mwando kukwana, kugona kwakanaka kwemhepo, anti-rends, kukwegura kuramba, anti-chakuvhe etc.
2). Chimiro chiri ABS, inotaridzika zvakanaka, isiri nyore kuputsa, yakareba nguva yebasa, pro-nharaunda, yakanaka mhepo kuomesa, simbisa kusimba uye kuomarara kwechimiro, kudzikisira kuyerera kumashure.
3). Rectangular chiteshi, inonzwisisika ndiro yedaro, kushoma kwemukati brace, diki munzira kuramba, kushomeka kwemweya kurasikirwa, simbisa iyo max kupisa kuchinjana nzvimbo yepakati kuti uwane huwandu hwekuita
4). Module dhizaini, ipa akasiyana saizi musanganiswa wemipendero uye ndiro ukobvu
5). Hapana chinofamba zvikamu, yakaderera yekuchengetedza mutengo, compact dhizaini, diki saizi, inokodzera dzakasiyana zviitiko.
6). Inogona kushandisa iyo yekutsuka inonatsa kuchenesa guruva nemitumbi yekunze pane zvishandiso, zviri nyore kushandisa uye kugadzirisa.
Iyo ERC yekupisa exchanger musimboti inogadzirwa neantiseptic uye antibacterial fibrous bepa, ayo akakwirira mwando kubvumidzwa, anti-rends, anti-mildew;
hwaro hweABS hwakasimba, pro-nharaunda uye yakareba nguva yebasa;
chivharo chevhavha chakagadzirwa nesimbi yakakoshwa nepurasitiki kana mubato wewebhu.
Iyo ERC yekupisa exchanger musimboti inoshandiswa kune simba rekudzoreredza mhepo (ERV), iyo kuyerera kwemhepo kunogona kusvika ku30,000 m3 / h, inosanganisira imba uye yekutengesa mweya. Kune hunyoro uye kupisa kupisa kana mweya miviri ine tembiricha dzakasiyana uye hunyoro kuyambuka kuburikidza nekupisa kupisa musimboti, mweya mutsva uye pedza mweya nzira dzakaparadzaniswa zvachose kuti dzidzivise chero kunhuhwirira uye kutapurirana kwehunyoro, tembiricha inoendeswa kubva kunopisa (kutonhora) divi kune kutonhora (kupisa ) divi uye hunyoro hunotamiswa kubva kudivi hombe (diki) kudivi (diki) kudzoresa kupisa nesimba.